Duulimaadyada wali ka shaqeeya Bangkok Airways - Thailand Breaking News
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Duulimaadyada wali ku shaqeynaya Bangkok Airways
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Sababtoo ah ogeysiisyadii ugu dambeeyay ee laga helay Xarunta Thailand ee Xaaladda COVID-19 (CCSA) ee la xiriirta xayiraadaha safarka ee Thailand, Bangkok Airways Public Company Limited waxay ku dhawaaqday in si ku meel gaar ah loo joojiyay qaar ka mid ah duulimaadyadeeda gudaha muddada 13 - 31 July 2021.
Bangkok - Samui (wareega) 2 duulimaad maalintii
Duulimaadyada safarka ee safarka ah ee u dhexeeya Bangkok iyo Samui, oo qaadi doona rakaabka transit-ka caalamiga ah (3 duulimaad maalintii)
Samui - Phuket (roundtrip) 4 duulimaad usbuucii (Isniinta, Arbacada, Jimcaha iyo Axadda), duulimaadyadan waxaa la heli doonaa laga bilaabo 16ka Julaay 2021
Toddobaadkii hore waxaa la soo sheegay in Bangkok, ay Bangkok, Magaalada Malaa'igta waxay ku jirtaa kor u kac kale oo COVID-19 ah.
Maanta Bangkok Airways ayaa falcelisay oo joojisay duulimaadyadii dalka ee soo socda:
1. Bangkok - Chiang Mai (wareega wareega)
2. Bangkok - Phuket (wareeg)
3. Bangkok - Sukhothai (wareeg)
4. Bangkok - Lampang (wareeg)
5. Bangkok - Trat (wareeg)
Samui - Singapore (roundtrip) 3 duulimaad usbuucii (Isniinta, Khamiista, iyo Axadda), duulimaadyadan waxaa la heli doonaa laga bilaabo 1 Ogosto 2021 wixii ka dambeeya.
Bangkok Airways Public Company Limited waa shirkad duulimaad goboleed oo fadhigeedu yahay Bangkok, Thailand. Waxay ku shaqeysaa adeegyo jadwal ah oo loogu talagay meelaha laga tago ee Thailand, Cambodia, China, Hong Kong, India, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Singapore, iyo Vietnam. Saldhigeeda ugu weyn waa garoonka diyaaradaha ee Suvarnabhumi.
Rakaabka loo qorsheeyay inay safraan kahor 31-da Luulyo 2021 waxaa laga dhaafi karaa lacag bixinta dib-u-xisaabinta ama haddii kale waxay dalban karaan lacag-celin ah foojarka safarka si loogu isticmaalo tikidhada mustaqbalka. Rakaabku waxay sameyn karaan wixii isbedel ah ee lagama maarmaanka ah illaa 24 saac kahor duulimaadkooda. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga arki karaa www.bangkokair.com/travel-voucher (shuruudaha iyo xaaladaha ayaa lagu dabaqayaa).
Rakaabka doonaya inay wax ka beddelaan safarkooda oo aan lahayn taariikh safar oo cusub oo cayiman (tikidh furan) waxay ku soo gudbin karaan codsigooda iyagoo adeegsanaya https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L 24 saac gudahood ka hor taariikhda la qorsheeyay ee bixitaanka. Diyaaraddu waxay isticmaali doontaa macluumaadka lagu bixiyo foomka noocaas ah si ay u sii hesho rakaabka.
Rakaabku waxay kula xiriiri karaan shirkadda diyaaradaha marinnada soo socda;
Xarunta Wicitaanka: Tel. 1771 iyo 02-270-6699 (inta lagu jiro 8 subaxnimo - 8 galabnimo)
Wadahadalka PG Live: https://bit.ly/PGLiveChatEN
Rakaabka tikidhada ka goostay wakaaladaha socdaalka waxaa lagula talinayaa inay si toos ah ula xiriiraan wakiilladooda si loo sii diyaariyo.
Intaa waxaa sii dheer, shirkaddu waxay ku dhiirrigelisaa rakaabka inay hubiyaan ogeysiisyada, amarrada, iyo hannaanka safarka, meel kasta oo ay tagayaan ka hor inta aysan ka safrin hay'adaha la xiriira sida:
Xarunta Maamulka Xaalada COVID-19 (CCSA)
Garoomada diyaaradaha ee Thailand www.airportthai.co.th/en/
Waaxda Garoomada www.facebook.com/DepartmentOfAirports/